Masar waxeey heshay Naxashyo qadiim ah oo ka badan 100 xabo (Faraciinti hoore) - Jowhar somali news leader
By hanad	 On Nov 16, 2020
Masar ayaa Sabtidii shaacisay daahfurka sanduuq qadiimi ah oo ay ku jiraan in ka badan 100 sarcophagi oo aan wali taariikhi ahayn, kaas oo soo jiray wax ka badan 2,500 sano ka hor, waana kii ugu weynaa ee la helo sanadkan.
Naxashka alwaaxda shaabadaysan, oo laga soo saaray goobta dhexdeeda waxyaabo badan oo xiiso leh, waxaa iska lahaa saraakiisha ugu sareysa xilligii dabayaaqadii iyo xilligii Ptolemaic ee Masar hore.
Waxaa laga helay seddex godad oo 12 mitir qoto dheer ah (40 fuudh) oo ku yaal xaafada Saqqara necropolis ee koonfurta Qaahira.
Khubaradii qadiimiga waxay fureen naxash si ay u muujiyaan hooyo ku duudduubtay xabaal lagu qurxiyay sawirro hieroglyphic midabo badan leh.
Saqqara, oo ay kuyaalaan in kabadan dersin Ahraam, monasteriyado qadiimi ah iyo qabuuraha xoolaha, waa necropolis weyn oo kutaala caasimada Masar qadiimiga ah ee Memphis, oo ah UNESCO World Heritage Site.
“Saqqara wali ma uusan shaacin waxa ku jira oo dhan. Waa hanti, ”ayuu yiri Wasiirka Qadiimiga iyo Dalxiiska Khaled al-Anani oo ka hadlay xafladda daahfurka.
Baaritaano ayaa wali socda. Markii aan faaruqino sagxadda aaska, waxaan helnaa irrid laga galo mid kale. ”
Raadintii ugu dambeysay waxay timid bil uun kadib markii khubarada cilmiga dhulka ee aagga ay ka heleen 59 sanduuq alwaax oo aad loo ilaaliyay oo la xiray, oo sidoo kale taariikh ahaan jiray wax ka badan 2,500 sano ka hor.
‘Taalo qurxoon, cajiib ah’
In ka badan 40 taallo oo ah Sanabyo hore iyo waji duug ayaa sidoo kale la helay, ayuu yiri wasiirka.
Laba taallo oo alwaax ah oo dheeri ah ayaa laga helay xabaashii uu lahaa xaakim hore oo ka soo jeeday boqortooyadii lixaad, sida uu sheegayo Mostafa Waziri, oo ah xoghayaha guud ee golaha ugu weyn ee ka soo horjeedka Masar.
Si dhakhso ah looma cadeyn in taallooyinka ay sawireen mid ka mid ah xubnaha qoyska garsooraha, laakiin taallo ayaa la rumeysan yahay inay ka muuqato shaqsi lagu magacaabo Heteb Ka, oo “uu ixtiraami jiray boqorka”, ayuu yiri Waziri.
“Quruxda taalada… waxaa laga arki karaa sunniyaheeda, shaarubaha iyo baarkooda. Gabi ahaanba waa wax qurux badan oo cajiib ah, ”ayuu raaciyay.
Sarcophagi-ka waxaa loo qaybin doonaa dhowr madxaf oo ku yaal Masar, oo ay ku jiraan Matxafka weyn ee Masar (GEM) ee aan weli la furin ee ku yaal Giza Plateau.
Waxay ku taalaa meel u dhow caanka Ahraamta Giza, GEM waxaa loo qorsheeyay in la daah furo sanadka 2021 dhowr dib u dhac ka dib.
Anani wuxuu u aaneeyay daahfurka Saqqara howlo qoditaan balaaran sanadihii la soo dhaafay.
Raadin kale oo ka jirta magaalada ballaaran ee Saqqara necropolis ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo bisha Diseembar ama horraanta 2021.
Khubarada cilmiga dhulka ayaa sidoo kale rajeynaya inay helaan aqoon-isweydaarsi duug ah oo loogu talagalay samaynta naxashyada alwaaxda loogu talagalay maydka.
Waziri wuxuu sharraxay in Masaaridii hore ay ku iibsan jireen sanduuqyadooda meheraddan aqoon isweydaarsigan.
“Waxaan fileynaa inay noqoto meel u dhow faashashka naxashka,” ayuu yiri Waziri.
Masar waxay rajeyneysaa in daahfurka qadiimiga ah uu kicin doono dalxiiska, waaxdan oo ay soo wajahday dhibaatooyin badan tan iyo kacdoonkii 2011 ilaa cudurka faafa ee coronavirus ee hadda.